Ahoana no hampivoarana hery?
Ny hery dia ny fahaizana ara-batana amin'ny hozatra, mamela olona iray hampiakatra lanja mavesatra, mba handresena ny herin'ny hery. Misy fitsipika maromaro fototra amin'ny fampivoarana hery lehibe, izay tsy ahafahana manatsara ny vokatra tsara. Ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny fampandrosoana an'io mari-pamantarana io dia atleta.
Ahoana no hampivoarana hery ara-batana?
Mba hahatratraranao ny fahombiazanao dia mila manatona ny olana ianao amin'ny fomba feno, manadino ny fomba fijery samihafa.
Ahoana no hampivoarana hery:
Tandremo ny sakafo, satria ny vatana dia tokony hahazoana proteinina sy vozona , ary ny isa dia tokony hampitomboina ny isa. Raha tsy izany dia tsy misy toerana ahafahana mampiasa hery amin'ny fampiofanana. Ireo atleta efa za-draharaha dia manoro hevitra ny mikarakara ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahantena - monohydrate creatine.
Ampitomboy hatrany ny lanjany miasa. Ny entana dia tokony hofidina amin'ny fomba toy izany fa amin'ny farany dia mitodika mba hanao 3-5 indray miverina ny fampiharana amin'ny fomba tsara.
Ataovy azo antoka ny fampidirana fototra amin'ny fampiofanana anao, satria avelan'izy ireo haingana ny vokatra tianao. Ny fanaovana fanatanjahan-tena dia natao hamokarana tsirairay avy ny hozatry ny tsirairay.
Mba hahazoana ny vokatra dia ilaina ny mifantoka amin'ny tanjona iray amin'ny fampiofanana ary amin'ny tranga izany dia ny fampivoarana tanjaka, koa aza manofinofina amin'ny fotoana iray, ohatra, ny musculature of the body.
Raha miresaka momba ny fomba hampiroboroboana hery hery hery dia ilaina ny manome torohevitra mahasoa iray hafa - mampiasa teknika hafa mba hitazonana ny hozatra amin'ny fampiasana ny enta-mavesatra. Ohatra, azonao atao ny mampitombo ny enta-mavesatra amin'ny fomba fanao mandritra ny fanatontosana. Azonao atao ny manao fanatanjahan-tena miaraka amin'ny lanjany lehibe indrindra, izany hoe, amin'ny mety ho atao indray mandeha. Teknika iray mahaliana hafa no fototry ny pyramida mpanodina. Mba hanaovana izany, amin'ny dingana voalohany, dia averina averina 3-5 ny fampiharana amin'ny lanja lehibe indrindra, dia mihena ny lanjany, mba hahafahanao hanao 6-7 indray amin'ny manaraka, sns.
Fomba fanaovan-tsoa ho an'ny mpivady
Physalis - tsara sy ratsy
Ny bara proteinina dia tsara sy ratsy
Hanimba vokatra sakafo
Ny vokatra avy amin'izany dia mitombo
Inona ireo menaka mahasoa?
Ahoana no hanaovana kodiarana amin'ny hamsters amin'ny tananao?
Taom-baovao tany India - fomban-drazana
Fomba hisafidianana lamba rongony - torohevitra mifidy akanjo tsara
Eokônina manga eo afovoany
Inona no nofinofin'ny ray aman-dreny?
Ny tantaram-pofomamin'ny vehivavy
Pilaf miaraka amin'ny henan-kisoa amin'ny multivariate - recipe
Mialà ao amin'ny efitra fandroana
Ahoana no hanamarinana ny vadin'ny olona?
Ahoana no hanatsarana ny fahitana amin'ny myopia?
Loko menaka - fampiharana
Photoshoot amin'ny kilao